विप्लवको गृह गाउँमा प्रहरी समुदाय साझेदारी कार्यक्रम
२०७६ जेठ २९ बुधबार १९:२०:००
टिभी अन्नपूर्ण, कपिलवस्तु ।
नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लवको गृह गाउँ शिवगढीमा प्रहरी समुदाय साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । प्रहरीसँग समुदायको बढेको दुरी घटाउन जिल्लाको शिवराज नगरपालिका– ९ शिवगढीको भगवापुर गाउँमा प्रहरी र समुदाय बिच साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय सुन्दरी डाँडाको संयुक्त आयोजनामा नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत माध्यमिक विद्यालय समुदाय र प्रहरी बिच सम्बन्ध सुदृढ बनाउन कार्यक्रम गरिएको हो । गत फागुन २३ गते प्रहरीले शिवगढीमा सर्च अप्रेसन सञ्चालन गरेपछि प्रहरी र त्यहाँका समुदाय बिच दुरी बढेको थियो । माओवादी सशस्त्र युद्धकालनि समयमा शिवगढी माओवादीको आधार शिविर थियो । शिवगढीमा नै विप्लवको घर र उनका अधिकांश समर्थकहरू छन् । उक्त सर्च अप्रेसनमा विप्लव समूहका नेता दुर्गा बहादुर रोकालाई हतियार सहित पक्राउ गरेको थियो । सोही सर्च अप्रदेशनकै क्रममा नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत मा. वि. का प्रअ यादव चन्द्रलाई पक्राउ गर्न खोज्दा विद्यार्थी र स्थानीयले अवरोध गरे पछि प्रहरी पछि हटेको थियो । तिनै विद्यार्थीको सहभागिता र प्रअ चन्द्र कै अध्यक्षतामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । गत फागुनमा प्रदर्शनमा उत्रेका विद्यार्थी, शिक्षक अभिभावकहरू प्रहरीले गरेको कार्यक्रममा भने हातेमालो गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । सो अवसरमा प्रअ चन्द्रले आफूले अपराध न्यनीकरण र शान्ति स्थापनामा प्रहरीलाई साथ दिने प्रतिबद्धता जनाए ।
'समाजलाई अपराधयुक्त बनाई भयमुक्त बनाउने हाम्रो पनि दायित्व हो, यस्तो कार्यक्रममा प्रहरीलाई मेरो साथ छ’ उनले भने । सो अवसरमा प्रदेश नम्बर ५ का प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी नायव महानिरीक्षक पीताम्बर अधिकारीले समाजको उत्थान र शान्ति स्थापनाकालागि सबै नागरिक प्रहरी बनी पहरेदारी गर्नु पर्ने बताए । देशब्यापीरुपमा भइरहेका विस्फोट, हत्या हिंसा बलात्कारका घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले संविधान र कानुन विपरीत भएका यस्ता काम प्रहरीको एक्लो प्रयासले मात्र सफल हुन गाह्रो पर्ने बताए । उनले बालबालिकाहरूलाई विभिन्न अपराधमा प्रयोग गरी पीडित बनाइएकाले उनीहरूलाई जोगाउन समेत समुदाय सचेत हुनु पर्ने बताए । सो अवसरमा विद्यालयको कक्षा ८ मा अध्ययनरत विद्यार्थी अभिषेक थापाले कार्यक्रमबाट बालविवाह, बलात्कार, लैङ्गिक हिंसा, लागु औषध लगातयका विषय जान्ने मौका पाएको बताए । ‘ प्रहरी देख्दा नै डर लाग्थ्यो अहिले प्रहरीले नै हामीलाई विद्यालयमा आएर धेरै राम्रा कुरा सिकाए ’ उनले भने ‘ हामी बालबालिकाहरूले पनि अपराध घटाउन प्रहरीलाई सहयोग गछौ ’ उनले भने ।
प्रहरी उपरीक्षक दीप शमशेर राणाले प्रहरी र समुदाय बिच सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न विकट शिवगढीमा कार्यक्रम राखिएको बताए । गत फागुनमा भएको घटनाले प्रहरी र समुदाय बिच बढेको दुरी हटाउन कार्यक्रम सहयोगी बनेको उनले बताए । उनले अपराधयुक्त जिल्ला बनाउन समुदायलाइृ प्रहरीसँग हातेमालो गर्न अपिल गरे । कार्यक्रममा ९० जना बढीको सहभागिता थियो ।